DHIRTA APPLE ANIS SCARLET: SHARAXAADA KALA DUWAN IYO SAWIRRADA - BEERTA
Anis Scarlet - mid ka mid ah noocyo caan ah oo si taxaddar leh loo beeray noocyo Ruush ah ee tufaax.
Nooca ugu caansan ee asalkiisu waa kala duwanaansho isku-dhafan oo ka mid ah beeraha laga soo dhoofiyo iyo nooc ka mid ah tufaax-cayayaanka oo koray bangiga midig ee Volga.
Caddaynta noocan ah waxaa lagu xaqiijiyay mid la mid ah qaabka caleemaha, caleemaha iyo dhismaha guud ee geedka.
Markaa waxaad akhrin doontaa sharaxaadda Anis Scarlet kala duwan iyo arki sawirka midhaha iyo waxa geedka tufaaxu u eg yahay.
Kala duwanaanshaha inta uu noolyahay ayaa si ballaaran u faafay gobolka Volga.
Maxaa ka qayb qaatay tilmaamihii ugu wanaagsanaa ee xasilinta jiilaalka iyo iska caabbinta abaarta, taas oo ay ku mahadsantahay taas oo ah casaankii aadaada lagu tiriyo geedaha tufaaxa Bisaylkiisa xilliga dayrta.
By dayrta kala duwan yihiin: kamuunta toban Sverdlovsk, casaan Altai, SIC Sanguineous, Borovinka, Volzhanka, Jonathan, saxaraha Petrova, Long (Kitaika) Zhigulevskoye, Imrus, baraf Calvillo, Kutuzovets, Junior Naturalist, malo, Sweet, Prima, u ageegi wiilal, Dhagax, Sunny, Bellefleur Kitayka, Geedka Qalinka Qalinka, Qalinka Cusub.
Sharaxaad kala duwan Anis Scarlet
Tixgelin si gaar ah muuqaalka tufaaxa iyo midhaha.
Horumarinta jawiga kulul oo ay la socdaan taariikhda "awowayaashiin" duurjoogta ah ayaa u ogolaanaya Anis inuu koro cabbir wanaagsan - celcelis ahaan 6-7 mitir.
Taajkii geedku wuxuu leeyahay qaabka ballaaran ee haramkataas oo dhexroorka saldhigga ah ay noqon karto ilaa 7-8 mitir.
Qodob adag oo aad u horumarsan iyo caleemo dhexdhexaad ah ayaa leh ukun-qaabeeya oo leh midab madow oo madow.
Geedku wuxuu bilaabmaa inuu jahwareeriyo sannaddii shanaad ee noloshayda.
Cabbirka miro ayaa ku xiran da'da geedaha: on tufaax yar yar ee size dhexdhexaad ah, qaba da'da geedka tufaaxa, waxay bilaabaan inay hoos u.
Miisaanka caadiga ah ee tufaaxu waa 80-100 g
Qaababka tufaaxu waa wareegsan, siman, marmarka qaarkood waxaa jira ribbada yar.
Hoolka dhererka gaaban waa mid ballaaran, oo leh qoto dheer oo qeexan.
Maqaarka dhalaalaya ee miro waa siman, midabkiisu waa cirro huruud ah oo ilqad leh oo caaro guduud ah. Midabku waa siman yahay, oo aan lahayn dhibco cad ama calaamado, si taxadar leh loogu daboolo dunta cufan ee cufan.
On gooyaa, maqaarka waa cagaaran cagaaran.
Jirka tufaaxa wuxuu leeyahay midab cagaaran.
Sida noocyada kala duwan ee dabayaaqadii-Bisaylkiisa, jidhku waa cufan, qoyan, la dhadhan dhadhan-macaan leh oo ku dhowaad ur aan ur lahayn.
Kalluumeysiga tufaaxa bilowga dayrta gaadiidka iyo kaydinta si fiican.
Kalluunku waa mid ka mid ah noocyada ugu da'da weyn ee geedaha tufaaxa ee Volga ee ennobled. Cunto-beerka dilka ah iyo beerista dhagaxa dhagaxyada kala duwan ayaa noo ogolaaday inaan abuurno in ka badan konton dabeecad oo kala duwan.
Tan iyo dhammaadkii qarnigii sagaalaad, noocyo badan oo cusub oo ka mid ah dabiicada caadiga ah ee la socota ladaga deegaanka ayaa lagu soo bandhigay bandhigyo caalami ah oo ah warshadda beeraha iyo miraha koritaanka Russia.
Maanta, noocyo saafi ah oo ah Anis Scarlet (sida uu dhigayo Diiwaanka Gobolka) ayaa badanaa laga heli karaa ee waqooyi-galbeedka, Volga-Vyatka, gobollada dhexe ee dhexe.
Anis Scarlet ayaa aad ugu badnaa beeraleyda gobolka Volga, laakiin iyada oo taa ku qanacsan tayada la-qabsashada, waa sahlan tahay in la hagaajiyo gobol kasta oo Ruush ah, marka laga reebo waqooyiga qoto dheer.
Geedaha dulqaad qabow iyo abaar, uma baahnid ciid ah gaar ahaan bacrin ah (inkasta oo ay ku habboon tahay quudinta miraha ay aad u weyn tahay iyo nadiifiye) iyo si guul leh ayey u koraan xitaa meelaha qulqulka ama buuraha.
Tayadaas oo ah geedo ayaa suurtogal ah Nidaamka xididsan ee wanaagsanraadinta qoto dheer ee qulqulka ilaa saddex mitir. Cadaadiska barafka ee barafka casaanka ah waa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee ku dhexjirta.
Waayo, laga beerto ee gobolka this jira noocyo ku haboon Antonovka Salaad, Aelita, Anis xariijimo, Grushovka Winter, Kuibyshev, Apple halkay, Lobo, Yandykovskoe, Jubilee Moscow Stroevskoe, Christmas, Rossosh, North Sinap, Memory Ulyanischeva, Reinette Simirenko, Cliff, Red Hore , Quinty, July Chernenko, Rennet Chernenko, Isetskoe dambe.
Iyada oo daryeel ku habboon, geedku wuxuu ku koraa ciidda bacrin ah ama labiska dusha sare ah. sannadka shanaad bixin karaa laga bilaabo 200 ilaa 300 miro.
In miisaanka miisaanka, iyada oo ku xidhan gobolka, dhalidda waa laga yaabaa laga bilaabo 100 ilaa 230 kg.
Anis Scarlet, sida dadka kale noocyada dayrta, ma lumiso bandhigga illaa dhammaadka Diseembar - bartamaha Janaayo.
Kaydinta taxadar leh waxay u baahan tahay raacitaan sharciyo dhowr ah:
Goynta tufaaxa waxaa lagu fuliyaa oo kaliya cimilada qalalan;
tufaaxa la diyaariyey waa in aan la maydhin ama la tirtirin, maadaama ay taasi tirtirayso lakabka miro khafiif ah ee ilaalinta dabiiciga ah;
weelku wuxuu u adeegi karaa sanduuqyo alwaax ah, oo ku yaal meel qabow;
lakab kasta oo cusub oo tufaax ah ayaa la dhigaa bacda qashinka;
Waxaad la dagaallami kartaa kalluunka lama huraanka ah adoo ku daraya diirka basasha qallalan si ay u qaboojiyaan.
Si loo gooyo geedka tufaaxa si uu u siiyo dalag goosasho fiican leh iyo in aan la qaadin cudurada, waxaa lagama maarmaan ah in la raaco talooyin tiro badan.
Si loogu guuleysto horumarinta Anis Scarlet, waxaa lagugula talinayaa inaad doorato carrada bacrin ah. on dushiisa qorraxda dhulka.
Qoyaanka geedo loogu talagalay waa in ay ahaadaan kuwo weyn oo ku filan derbiyada, 1-1.25 cm ballaaran, 0.5-0.6 m qoto dheer.
Bacriminta iyo quudinta dheeriga ah ee foomka 25-35 kg ee digada qudhuntay iyo wax yar superphosphate ash qoryo.
Marka laga beerto geedo tufaax ah, dhirta waa in la dhigaa sidaas qoorta xididku wuxuu ahaa 10 cm dhulka kor ku xusan. Ka dib markii laga beerto, geedka waxaa si taxaddar leh loo waraabiyaa.
Dhirta dhirtu waa dhaqamo, ma dalbanayo daryeel gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira xeerar dhowr ah oo ay tahay in la raaco, oo raba in la kordhiyo wax-soosaarka.
Mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee daryeelka Anis waa waraabinta qasabka ah ee qasabka ah, gaar ahaan sanadaha ugu horreeya ee nolosha, halka nidaamka xididka aan wali la dhicin.
Waraabinta ugu horeysa waa in la sameeyaa ka dib xilliga ubaxa, ku celinta nidaamka hal mar toddobaadkii.
In tufaax dhexe ku filan 20-25 litir oo biyo ah hal waraabka, inkastoo mugga dareeraha uu kordhi karo xilliyada kulul, hawada qallalan.
Xilliga jiilaalka, waa in dhirta la xidho, maadaama ay ka hortageyso dhir iyo midab daran. (si kastaba ha noqotee, xitaa marka uu qabowgu jiro, si dhakhso ah ayuu u soo baxayaa.
Si loo kordhiyo dhalidda, waxaa lagama maarmaan ah in si joogto ah loo sameeyo taajkii iyo codsan Bacriminta organic.
Cajiibka Kaneecada waxaa lagu qaadaa cuduro isku mid ah sida dalagyada ugu badan ee tufaaxa ee ku yaala bartamaha dhexe.
Macmacaanka macaanka - huuri cad oo saameeya caleemaha yar yar, caleemaha iyo burooyinkeeda. Horumarka firfircoon ee cudurku wuxu keenayaa in la qalajiyo oo ka dhaco labada caleemo iyo ugxan-yaryar.
Waxaad ka soo kaban kartaa cudurka adigoo isticmaalaya xalalka kollofulida ee kolloidal midkood daroogo "Scor" iyo "Topaz".
Jeex - Cudur fungal ah oo dhacaya marka qoyaan xad dhaaf ah iyo istaagida hawada. Kabuubku wuxuu saameeyaa caleemaha iyo midhaha geedka. Waxaa muuqda qaabka dhibco madow ee caleemaha iyo miraha.
Waxaad ka takhalusi kartaa adigoo isticmaalaya xal daaweynta taajka ah HOL ama oxychloride copper dayrta ama gu'ga ilaa muuqaalka kore ee burooyinka ugxan.
Casaankii Anise waxaa jecel beeraleyda Ruush ah ee aan qabyo ahayn, iska-caabbinta heerkulka jiilaalka hoose iyo caabbinta cudurada wanaagsan.
Inkasta oo kala duwanaanta noocani aysan haysan dhalid sare, tani faa'ideysiga waxaa magdhowaya dhadhanka casiir leh ee miro yar.